﻿	Juicy Lucy Meatballs - Ezi Ntụziaka
lemon meringue achịcha na-edozi ma ọ bụ na ọ bụghị
nri ụtụtụ achịcha achịcha na achịcha achịcha
ole shredded ọkụkọ kwa onye maka tacos
anụ ezi cheeseburger achịcha na mpekere onwa
esi kwadebe oyi kpọnwụrụ agwa agwa
Obi dị m ezigbo ụtọ na mụ na Lingham’s Hot Sauces esonyerela gị iwetara gị anụ Juicy Lucy ndị a. Achịcha Gooey jupụtara n'ime anụ anụ anụ dị nro ma saa ya mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ… zuru oke maka ụbọchị egwuregwu!
olee ebe àkwá ndị gbagọrọ agbagọ si abịa?
Enyi… nke a bụ… nke a bụ ihe ngosi na-akwụsị agụụ ị na-eche! Nke a bụ uzommeputa na ndị mmadụ na-aga ịjụ gị maka ugboro ugboro.
Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị Juicy Lucy (aka Jucy Lucy) ị ga-achọ itinye ya na ndepụta ịwụ gị! Ọ bụ ihu ọma n'ime si cheeseburger… a beef patty na gooey cheese n'ime. Yum ziri ezi?!
N'ezie yum, Otú ọ dị, ijere cheeseburgers anaghị adị mma mgbe niile… mana ijere anụ anụ bụ! A na-etinye cheeseballs a na-eri anụ na ihendori na-atọ ụtọ ma bụrụ nke a na-apụghị ịgbagha agbagha… na n'ezie zuru oke maka ụbọchị egwuregwu!
nri abalị hobo na ude mmiri ofe
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otu ihe gbasara m, ọ bụ na enwere m nzuzu maka ihe na-ekpo ọkụ! M hụrụ n'anya na mma nke ukwuu na-achọ na-ekpo ọkụ ihendori na ihe ọ bụla, cheesy bọọlụ gụnyere! Achọpụtala m na Lingham’s Hot Sauces na-enye ego zuru oke nke okpomọkụ na-atọ ụtọ na nkwenye maka ihendori a.
Ọbụghị naanị nke ahụ, sauces Lingham bụ 100% eke niile ma nwekwaa enweghị ndị na-eme mkpọtụ pụtara na ị na-enweta ezigbo ekpomeekpo! (Can nwere ike ịchọta ha na Walmart mpaghara gị). Efere ndị a zuru oke maka ntinye, dunking ma ọ bụ tinye obere ọkụ dị ụtọ na usoro ọ bụla! Ntụziaka a na-atọ ụtọ Lingham's Hot Sauce (mbụ) ma ha nwere ọtụtụ nke ọzọ dị ịtụnanya flavors (dị ka Ginger Hot Sauce M ji m NKỌROT AKWICKWỌ KWES STROT ) ! I nwere ike iso Lingham si na Facebook ma ọ bụ Kpọtụrụ maka mmụọ nsọ!
Ihe ’ll Ga-achọ Maka Ntuziaka a
* Meat Chopper Ngwá Ọrụ * Nnukwu Osimiri * Ground Turkey ma ọ bụ Amịrị *
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nriiri abụọ Nkeji Oge zuru ezu35 Nkeji Ọrụiri na ise bọọlụ Onye edemedeHolly NilssonObi dị m ezigbo ụtọ na mụ na Lingham’s Hot Sauces esonyerela gị iwetara gị anụ Juicy Lucy ndị a. Achịcha Gooey jupụtara n'ime anụ anụ anụ dị nro ma saa ya mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ… zuru oke maka ụbọchị egwuregwu! Bipute Ntụtụ
▢1 paụnd ata ata anụ
▢abụọ tablespoons yabasị mebiri
▢1 akwa nkochi ime akwa
▢3 tablespoons Panko achịcha crumbs
▢abụọ tablespoons Osisi Na-ekpo ọkụ nke Lingham
▢nnu na ala nwa ose nụrụ ụtọ
▢4 ounce esichara chiiz ma ọ bụ cheddar cheese bee n'ime 15 iberibe
▢green eyịm maka garnish nhọrọ
▢⅓ iko Osisi Na-ekpo ọkụ nke Lingham
▢⅔ iko Anụ Mmịkpọ ihendori
uto nke ulo dil Pịkụl itinye
Kpochapu oven na 400 Celsius. Wunye mpempe mmiri na mpempe akwụkwọ ma fesa ya na nri.
Bee chiiz n'ime obere obosara 15, wepụta ya.
Gwakọta yabasị, nkochi ime akwa, achịcha achicha, Worcestershire sauce, Lingham’s Hot Sauce and salt & ose. Gwakọta ruo mgbe agwakọtara ya. Tinye n'ime anụ ehi anụ ma gwakọta naanị ruo mgbe agwakọtara ya.
Kewaa ngwakọta beef n'ime iberibe 15. Ewepụghị otu ibe, tinye otu nke cheese n'etiti na kechie beef gburugburu chiiz akara ya dị ka mma i nwere ike.
Ime minit 15-18. (Echegbula ma ọ bụrụ na ị hụrụ na chiiz na-agbapụta, a ga-enwe ọtụtụ n'ime)!
Gwakọta ihe oriri na ihendori na saucepan wee weta obụpde karịa ọkara ọkụ. Kwe ka obụpde nkeji 2 mgbe ị na-akpali. Tinye na meatballs na toss na uwe. Na-eje ozi na-ekpo ọkụ!
Calorisị:Ogbe 128,Carbohydrates:7g,Protein:7g,Abụba:7g,Abụba Ajuju:3g,Cholesterol:41mg,Sodium:482mg,Potassium:145mg,Sugar:4g,Vitamin A:Ogbe 125IU,Vitamin C:5.4mg,Calcium:93mg,Iron:0.9mg
Isiokwukemmiri lucy, kemmiri ihe lucy meatballs, juru n'ọnụ meatballs N'ezieAgụụ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Nkwụnye ọkụ ọkụ nku nku ọkụ
ihe anụ na-eje ozi na eggplant parmesan
Zingtụnanya Meatballs! (Mkpụrụ anụ ụtọ na mmiri gbara ụka)!